Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia ayaa sheegaya tacadiyo kala duwan oo ay ciidanka wayaanuhu ugaysteen dadka shacabka ah ee Soomaalida Ogadenia.
Warkan oo aan kahelay xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa faah faahin kabixinaya xidhay, jidh-dil iyo dhaawac ay ciidanka cadawgu ugaysteen dad shacab ah oo aan waxba galabsanin waxayna udhaceen sidan.
Warku waxa uu sheegayaa in 19/6/17 deeganka lagu magacaabo Laasdharkaynle oo Dagmada Qabridahare katirsan ay ciidanka wayaanuhu si bini’aadam nimada kabaxsan uladhaqmeen muwaadin udhashay deegaanka oo ay labada Indhoodba kasoo saareen, wiilkan ay ciidanka wayaanuhu indhaha karideen ayaa magaciisa naloogu sheegay Maxamuud Ow Muxumad.
Waxaa oo intaas uu warku ku darayaa in 19/6/17 Tuulada Dalaad oo Dagmada Qabridahare katirsan ay ciidanka gumaysigu kuxidheen nin shacab ah oo lagu magacaabo Faarax Cabdi. Isla taariikhdan ayaa Dagmada Sagag waxay ciidanka wayaanuhu ku xidh xidheen muwaadiniin badan oo ay kamid yihiin:-
1 faarax buraale
2 mahad ismaaciil
3 ibraahim fadxi
4 axmad cabdi caafi
5 shaafi oo aanaan magaciisa oo buuxa aanaan helin.
Sidoo kale ayaa 20/6/17 meesha lagu magacaabo Daawadiid oo Dagmada Dhuxun katirsan ay ciidanka wayaanuhu ku xidh xidheen dadka kala ah:-
1 cowl cabdulaahi xassan
2 cabdibaaqi sh cabdi sh maxamad
3 sucaado maxamad cumar
4 sahro cabdi siyaad
5 anfac cabdulaahi yare
6 faarax cabdi xassan iyo 18 qof oo kale.
Dhinaca kale 21/6/17 Dagmada Sagag ee Gobolka Nogob waxay ciidanka gumaysigu ku xidheen labo muwaadin oo lagu kala magacaabo maxamad Maadhiin maxamad iyo Faadumo xassan caydiid. Degmada Birqod oo Gobolka Jarar katirsan ayay ciidanka wayaanuhu ku xidheen dad aad ubadan waxaana magacyadooda aan helay:-
1 sangaab canjeex maxamuud oo isaga iyo qayskiisii iyo xoolihiisiiba laxidhay
2 mukhtaar aadan cali
3 maxamad aadan cali.